'Imfazwe yeHlabathi Z 2' kaBrad Pitt ifumana i-Ax kwiiParadise zeMifanekiso - Iimuvi
Eyona Iimuvi Ubulungisa be-Undead: I-Paramount itsalela iplagi kwi 'Imfazwe yeHlabathi Z 2'
Ubulungisa be-Undead: I-Paramount itsalela iplagi kwi 'Imfazwe yeHlabathi Z 2'
UBrad Pitt ngo-2013 Imfazwe Yehlabathi Z 2. Jaap Buitendijk - © 2013 Imifanekiso ephambili.
Kwi-Hollywood eqhubekayo iimfazwe zenkululeko , ikhosistim yamandla ichazwa kukuphindaphindeka kwemali-ngokusisiseko, isakhono se studio sokuvelisa izinto ezixhasa imithombo yengeniso yeqonga. I-blockbuster iba yibhokisi ephumeleleyo kwi-ofisi ezala i-trilogy, amalungelo elayisensi, ukuthengisa, njl. Inkampani igqibe okokugqibela phakathi kwee studio zeBig Six kwibhokisi yasekhaya kwi-2018 kwaye ayikhange iqhekeze ezintathu eziphezulu ukusukela nge2011.
Ukunikezelwa komgangatho wokuwohloka kunye nomtsalane we Abaguquleli uthotho (Kulungile, siya kuvuma Inyamakazi (inesidima), ikamva elingaqinisekanga le- Inkwenkwezi yetrek I-franchise kunye nenyaniso yokuba inenye Iifudu zeNinja Ukuqalisa kwakhona kwindlela, umntu unokuzibuza ukuba kutheni iParamount isindise ngokusesikweni ixesha elide lokuthwala u-Brad Pitt's 2013 zombie feature Imfazwe Yehlabathi Z , njengoko kuchaziwe ngu Uluhlu lokudlala . Emva kwayo yonke loo nto, ikukufuna ngamandla i-franchise. Kodwa ucinga ntoni? Ngokwenene eli yayilinyathelo elifanelekileyo lesitudiyo.
Eyokuqala Imfazwe Yehlabathi Z Wayekhathazwe yimicimbi yemveliso engapheliyo kunye nomdlalo weqonga. U-Pitt kunye nomlawuli uMarc Foster baqaqambisa iintloko-yiyo loo nto owayesakuba ngumqeshi owayesebenze ixesha elide uDavid Fincher kulomkhondo, lelona thuba liphosakeleyo apha-kwaye imveliso yavalwa ngenxa yokubhala ngokutsha okukhulu kunye nokuphinda kubize iindleko. Uhlahlo-lwabiwo mali lokugqibela ixelwe jikeleza malunga ne-250 yezigidi zeedola, kwaye ukwamkelwa okumangalisayo kwefilimu kwakungeyongxaki kangangokuba abaphulaphuli babefa (kwaye baphinde bavuselele) ukulandelelana. Ingeniso iyonke yezigidi ezingama-540 zeedola kwihlabathi liphela yomelele, kodwa akukho ndlela yesiqinisekiso sempumelelo yepropathi kwixa elizayo.
Kwiminyaka emithandathu kamva, iParamount iyazigcinela inyanda yemali kunye ne-PR embi ngokulandela isekethe akukho mntu wayemngxolisa. Njengoko Forbes 'UScott Mendelson wabonisa, Ngokumangalisayo kukuba, ehlotyeni apho Imfazwe Yehlabathi Z Ukoyiswa kukodwa kwahlaselwa ziindlela ezingafunekiyo. Ixesha liphele ngokuthandwa kwe Ukukhatywa kwe-Ass 2 , Inethiwekhi 2 , IiSmurfs kwaye UPercy Jackson: uLwandle lweZilo, ezazikho Zonke izinto ezenziwayo zincinci zombini xa kuthelekiswa nabandulelayo ngaphambili… kwaye ngokwenyani zinenzuzo.
Asitsho Imfazwe Yehlabathi Z 2 ngekhe ibe yingxaki. Sitsho nje ukuba siyibonile le fomyula ngaphambili.
Ngaphaya koko, iParamount ibonakala ngathi ihambise ibhloko yayo ye-blockbuster kwi Umsebenzi ongenokwenzeka ilungelo lokushishina, namanye amaxesha amabini angomhla wonyaka wama-2021 nowama-2022. Ngenxa yoluhlu oluphezulu lwehlabathi kunyaka ophelileyo Wela ngaphandle ($ 791 yezigidi) kunye nerekhodi eyomeleleyo yomenzi wefilimu uChristopher McQuarrie kweli lizwe, elo phulo kukubheja okukhuselekileyo.
Okwangoku, ngelixa singekhe sililele ukulahlekelwa ngu Imfazwe Yehlabathi Z 2 , Olunye uhlobo lwe-Fincher-eyalelwe i-zombie epic inokuba, ewe, yindumasi.
‘Umceli mngeni: Iingcombolo zegazi’ Isiqendu 4: # Corneesa
UJerry Brown ngekhulu lama-21
'UFargo' uye waphinda wazivumela, kwaye kwakunzima nangeli xesha
'Konke malunga noNina' Clichés Galela njengeMvula eHoboken
yayinguAbraham lincoln inkokeli elungileyo
ngubani ophumelele i-sanders clinton mpikiswano
eyona nto iphambili ekunciphiseni ukutya kwendalo
Ukujonga iifowuni ngaphandle kwentlawulo
Indawo efanelekileyo yokufumana ulwalamano ngokungaqhelekanga
iphume nini i-candy crush